Ny fiakanjo tena mety raha hanao spaoro
Mba ho vita tsara araka ny tokony ho izy ny fanantajahantena atao dia tsara raha manao akanjo mampahazo aina tsara rehefa manao spaoro. Toy ny ahoana tokoa no tena fitafy mety raha hanao spaoro ?
Manao « brassière »
Efa misy ny karazana tati-nono natokana hanaovana rehefa mitsambikina na mihazakazaka. Mitazona ny nono tsy hiroraka kanefa tsy hijaly loatra mandritra ny fampihetseham-batana atao mantsy izy ireny.
Akanjo mitroka ny hatsembohana
Mba tsy ho voaelingelin’ny hatsembohana be manamando ny akanjo rehefa manao fampihetseham-batana dia akanjo vita amin’ny lamba mitroka ny hamandoana sady mora maina na mamela ny rivotra hiditra ao anaty no tsara hanaovana.
Mba hahazo aina tsara koa dia tsara raha akanjo manaraka tsara ny vatana kanefa afaka miitatra fa tsy manery no ilaina. Tokony ho maivana ilay akanjo. Miankina amin’ny karazana spaoro kosa no isafidianana azy ho manara-batana na somary malaladalaka.
Kiraro tsy mihinjitra loatra
Mihena 24% ny taha mety hahazoana ratra mandritra ny fanaovana fanatanjahantena raha kiraro natokana hanaovana spaoro no hanaovana. Kiraro manaraka tsara ny fihetsika rehefa mamoritra tongotra na rehefa mitsambikina no mety. Mila faladian-kiraro azo aforitra tsara noho izany. Tsara koa raha ireo kiraro izay miaro amin’ny dona rehefa manatontona tongotra no safidiana.